Division ၁/(ကချင် ပြည်နယ်) ၂/(ကယား ပြည်နယ်) ၃/(ကရင် ပြည်နယ်) ၄/(ချင်းပြည်နယ်) ၅/(စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး) ၆/(တနလာရီတိုင်းဒေသကြီး) ၇/(ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး) ၈/(မကွေးတိုင်းဒေသကြီး) ၉/(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) ၉/(နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ) ၁၀/(မွန် ပြည်နယ်) ၁၁/(ရခိုင် ပြည်နယ်) ၁၂/(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) ၁၃/(ရှမ်း ပြည်နယ်) ၁၄/(ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး) Township
Select Division ကချင် ပြည်နယ် ကယား ပြည်နယ် ကရင် ပြည်နယ် ချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တနလာရီတိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ မွန် ပြည်နယ် ရခိုင် ပြည်နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း ပြည်နယ် ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး
HOME CONTACT ABOUT PRICING BLOG Agent အနေနှင့်လျောက်ထားရန်
: တွင်ပါ၀င်သော ပစ္စည်းများ
Select Division Select State/Division ကချင် ပြည်နယ် ကယား ပြည်နယ် ကရင် ပြည်နယ် ချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တနလာရီတိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ မွန် ပြည်နယ် ရခိုင် ပြည်နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း ပြည်နယ် ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး
Select Township Select Township ဗန်းမော်မြို့နယ် ချီဖွေမြို့နယ် တနိုင်းမြို့နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ် မချမ်းဘောမြို့နယ် မံစီမြို့နယ် မိုးကောင်းမြို့နယ် မိုးညှင်းမြို့နယ် မိုးမောက်မြို့နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် နောင်မွန်းမြို့နယ် ပူတာအိုမြို့နယ် ရွှေကူမြို့နယ် ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် ဆော့လော်မြို့နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ် ဘော်လခဲမြို့နယ် ဒီမောဆိုးမြို့နယ် ဖားဆောင်းမြို့နယ် ဖရူဆိုမြို့နယ် လ္လိုင်ကော်မြို့နယ် မယ့်စဲ့မြို့နယ် ရှားတောမြို့နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် ဘားအံမြို့နယ် ဖားပွန်မြို့နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် မြဝတီမြို့နယ် သံတောင်ကြီးမြို့နယ် ဖလင်းမြို့နယ် ဟားခါးမြို့နယ် ကန်ပက်လက်မြို့နယ် မတူပီမြို့နယ် မင်းတပ်မြို့နယ် ပလက်ဝမြို့နယ် တီးတိန်မြို့နယ် ထန်တလန်မြို့နယ် တွန်းဇံမြို့နယ် အရာတော်မြို့နယ် ဗန်းမောက်မြို့နယ် ဘုတလင်မြို့နယ် ချောင်းဦးမြို့နယ် ခန္တီးမြို့နယ် ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် အင်းတော်မြို့နယ် ကလေးမြို့နယ် ကလေးဝမြို့နယ် ကန့်ဘလူမြို့နယ် ကနီမြို့နယ် ကသာမြို့နယ် ကောလင်းမြို့နယ် ကျွန်းလှမြို့နယ် လဟယ်မြို့နယ် လေရှီးမြို့နယ် မော်လိုက်မြို့နယ် မင်းကင်းမြို့နယ် မုံရွာမြို့နယ် မြောင်မြို့နယ် နန်းယွန်းမြို့နယ် ပုလဲမြို့နယ် ဖောင်းပြင်မြို့နယ် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ရွှေဘိုမြို့နယ် ဒီပဲယင်းမြို့နယ် တမူးမြို့နယ် ထီးချိုင့်မြို့နယ် တန့်ဆည်မြို့နယ် ဝက်လက်မြို့နယ် ဝန်းသိုမြို့နယ် ရေဦးမြို့နယ် ယင်းမာပင်မြို့နယ် ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် ထားဝယ်မြို့နယ် ကော့သောင်းမြို့နယ် ကျွန်းစုမြို့နယ် လောင်းလုံမြို့နယ် မြိတ်မြို့နယ် ပုလောမြို့နယ် တနင်္သာ ရီမြို့နယ် သရက်ချောင်းမြို့နယ် ပဲခူးမြို့နယ် ဒိုက်ဦးမြို့နယ် ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် ထန်းတပင်မြို့နယ် ကဝမြို့နယ် ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ကျောက်တံခါးမြို့နယ် လက်ပံတန်းမြို့နယ် မင်းလှမြို့နယ် မိုးညိုမြို့နယ် နတ်တလင်းမြို့နယ် ညောင်လေးပင်မြို့နယ် အုတ်ဖိုမြို့နယ် အုတ်တွင်းမြို့နယ် ပန်းတောင်းမြို့နယ် ပေါင်ခေါင်းမြို့နယ် ပေါင်းတည်မြို့နယ် ဖြူးမြို့နယ် ပြည်မြို့နယ် ရွှေတောင်မြို့နယ် ရွှေကျင်မြို့နယ် တောင်ငူမြို့နယ် သနပ်ပင်မြို့နယ် သာယာဝတီမြို့နယ် သဲကုန်းမြို့နယ် ဝေါမြို့နယ် ရေတာရှည် မြို့နယ် ဇီးကုန်းမြို့နယ် အောင်လံမြို့နယ် ချောက်မြို့နယ် ဂန့်ဂေါမြို့နယ် ကံမမြို့နယ် မကွေးမြို့နယ် မင်းဘူးမြို့နယ် မင်းတုန်းမြို့နယ် မြိုင်မြို့နယ် မြို့သစ်မြို့နယ် နတ်မောက်မြို့နယ် ငဖဲမြို့နယ် ပခုက္ကူမြို့နယ် ပေါက်မြို့နယ် ပွင့်ဖြူမြို့နယ် စလင်းမြို့နယ် ဆောမြို့နယ် ဆိပ်ဖြူမြို့နယ် စေတုတ္တရာမြို့နယ် ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် သရက်မြို့နယ် ထီးလင်းမြို့နယ် ရေနံချောင်းမြို့နယ် ရေစကြိုမြို့နယ် အမရပူရမြို့နယ် အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ကျောက်ဆည်မြို့နယ် မတ္တရာမြို့နယ် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မလှိုင်မြို့နယ် မိတ္တီလာမြို့နယ် မိုးကုတ်မြို့နယ် မြင်းခြံမြို့နယ် မြစ်သားမြို့နယ် နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ငါန်းဇွန်မြို့နယ် ညောင်ဦးမြို့နယ် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် စဥ့်ကိုင်မြို့နယ် တံတားဦးမြို့နယ် တောင်သာမြို့နယ် သပိတ်ကျဥ်းမြို့နယ် သာစည်မြို့နယ် ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် ရမည်းသင်းမြို့နယ် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် လယ်ဝေးမြို့နယ် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ပျဥ်းမနားမြို့နယ် တပ်ကုန်းမြို့နယ် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ဇေယျာသီရိမြို့နယ် ဘီးလင်းမြို့နယ် ချောင်းဆုံမြို့နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ် မော်လမြိုင်မြို့နယ် မုဒုံမြို့နယ် ပေါင်မြို့နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် သထုံမြို့နယ် ရေးမြို့နယ် အမ်းမြို့နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဂွမြို့နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ဦးမြို့နယ် မြေပုံမြို့နယ် ပေါက်တောမြို့နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် စစ်တွေမြို့နယ် သံတွဲမြို့နယ် တောင်ကုတ်မြို့နယ် အလုံမြို့နယ် ဗဟန်းမြို့နယ် ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ် ဒဂုံမြို့နယ် ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ် ဒလမြို့နယ် ဒေါပုံ မြို့နယ် ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း မြို့နယ် လှိုင် မြို့နယ် လှိုင်သာယာမြို့နယ် လှည်းကူးမြို့နယ် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် မှော်ဘီမြို့နယ် ထန်းတပင်မြို့နယ် အင်းစိန် မြို့နယ် ကော့မှူးမြို့နယ် ခရမ်းမြို့နယ် ကျောက်တန်းမြို့နယ် ကြည့်မြင့်တိုင်မြို့နယ် လမ်းမတော်မြို့နယ် လသာမြို့နယ် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် မြောက်ဉက္ကလာပမြို့နယ် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ပုစွန်တောင်မြို့နယ် စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ် တောင်ဉက္ကလာပမြို့နယ် တိုက်ကြီးမြို့နယ် တာမွေမြို့နယ် သာကေတမြို့နယ် သန်လျင်မြို့နယ် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သုံးခွမြို့နယ် တွံတေးမြို့နယ် ရန်ကင်းမြို့နယ် သုဝဏမြို့နယ် ကျောက်တံထားမြို့နယ် ထောက်ကြံ့မြို့နယ် ကမာရွတ် အိုက်ချန်မြို့နယ် ဟိုတောင်းမြို့နယ် ဟိုပန်မြို့နယ် သိန္နီမြို့နယ် ဆီဆိုင်မြို့နယ် သီပေါမြို့နယ် ကလောမြို့နယ် ကျိုင်းတုံမြို့နယ် ကုန်းကြမ်းမြို့နယ် ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ကျောက်မဲမြို့နယ် ကျေးသီးမြို့နယ် လင်းခေးမြို့နယ် လားရှိုးမြို့နယ် လောက်ကိုင်မြို့နယ် ရပ်စောက်မြို့နယ် လွိုင်လင်မြို့နယ် မဘိမ်းမြို့နယ် မန်တုံမြို့နယ် မိုင်းဆတ်မြို့နယ် မိုင်းရှုးမြို့နယ် မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မိုင်းလားမြို့နယ် မိုင်းနဲမြို့နယ် မိုင်းပြင်းမြို့နယ် မိုင်းတုံမြို့နယ် မိုင်းယန်းမြို့နယ် မူဆယ်မြို့နယ် နမ့်ခမ်းမြို့နယ် နမ့်ဆန်မြို့နယ် နမ့်စန်မြို့နယ် နားဖန်မြို့နယ် နမ့်တစ်မြို့နယ် နမ္မတူမြို့နယ် နောင်ချိုမြို့နယ် ညောင်ရွှေမြို့နယ် ပန်ဆန်းမြို့နယ် ပန်ဝိုင်မြို့နယ် ဖယ်ခုံမြို့နယ် ပင်းတယမြို့နယ် ပင်လောင်းမြို့နယ် တာချီလိတ်မြို့နယ် တန့်ယန်းမြို့နယ် တောင်ကြီးမြို့နယ် ရွာငံမြို့နယ် ဘိုကလေးမြို့နယ် ဓနုဖြူမြို့နယ် ဒေးဒရဲမြို့နယ် ဟင်္သာတမြို့နယ် အင်္ဂပူမြို့နယ် ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် ကျိုက်လတ်မြို့နယ် ကြံခင်းမြို့နယ် ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် ကျုံပျော်မြို့နယ် လပွတ္တာမြို့နယ် လေးမျက်နှာမြို့နယ် မအူပင်မြို့နယ် မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် မြန်အောင်မြို့နယ် မြောင်းမြမြို့နယ် ငပုတောမြို့နယ် ညောင်တုန်းမြို့နယ် ပန်းတနော်မြို့နယ် ပုသိမ်မြို့နယ် ဖျာပုံမြို့နယ် သာပေါင်းမြို့နယ် ဝါးခယ်မမြို့နယ် ရေကြည်မြို့နယ် ဇလွန်မြို့နယ် ငွေဆောင်မြို့နယ် ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နယ်
Parami gasမှ ဖုန်းခေါ်ပေးစေချင်ပါသည်။
လာရောက်တပ်ဆင်ရမည့်အချိန် 9-10:00 AM 10-11:00 AM 11-12:00 AM 12-1:00 PM 1-2:00 PM 2-3:00 PM 3-4:00 PM 4-5:00 PM 5-6:00 PM
All latest news from blog
May 7/ 2020
"လိမ္မော်ရောင်တိုင်းသည် ပါရမီမဟုတ် … ပါရမီဂက်စ်အိုးတိုင်းသည်လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်သည်" မိသားစုတစ်ခုမှာ ပဲ့ကိုင်ရှင်လို့တောင် တင်စားလို့ရတဲ့ အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်အတွက် ပါရမီ Gas ရဲ့ အရေးပါပုံလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ် … လိမ္မော်ရောင်ပါရမီဂက်စ်အိုးလေးတွေဟာ အိမ်ရှင်မတွေရဲ့ စိတ်ခွန်အားတွေပါ လိမ္မော်ရောင်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ မိသားစုအတွက် အကောင်းဆုံး ဟင်းလျာတွေကို နေ့စဉ်ချက်ပြုတ်နိုင်ဖို့ ပါရမီ Gas ကိုသုံးပါ အဲဒီလိုချက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ ဟင်းပွဲတွေဟာ စွဲမက်မှု၊ ဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေမှာပါ… ဒီလိုအဓိပ္ပါယ်အပြည့်နဲ့ဟင်းလျာတွေကို ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် မိသားစုများအား သုံးဆောင်စေခြင်းဖြင့် အားပေးမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ အောင်မြင်မှုတွေပေးနိုင်မယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲရှင်… ပါရမီ Gas ကိုဝယ်ယူသုံးစွဲမယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်း ၈၄၈၄ ကိုရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်လိုက်ပါနော် "လိမ်မျောရောငျတိုငျးသညျ ပါရမီမဟုတျ … ပါရမီဂကျဈအိုးတိုငျးသညျလိမ်မျောရောငျဖွဈသညျ" မိသားစုတဈခုမှာ ပဲ့ကိုငျရှငျလို့တောငျ တငျစားလို့ရတဲ့ အိမျရှငျမတဈယောကျအတှကျ ပါရမီ Gas ရဲ့ အရေးပါပုံလေးကို ပွောပွခငျြပါတယျ … လ
May 11/ 2020
🌴ရဝေတောတွေ ထိန်းသိမ်းလို့ စိမ်းစိမ်းညို့ ဟိုတောင်ဆီ 🇲🇲သစ်တောနဲ့ရာသီ၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ အသက် 💖ဆွေမျိုးတွေ ထမင်းချက်မယ့် ပါရမီ Gas ✅ပါရမီ Gas ဖြင့် ချက်ပြုတ်၍ ကောင်းမွန်လှပ သော အနာဂါတ် ကိုဖန်တီးကြပါစို့ 📣အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ၊ Promotion တွေရှိတယ်နော် 🌴ရဝတေောတှေ ထိနျးသိမျးလို့ စိမျးစိမျးညို့ ဟိုတောငျဆီ 🇲🇲သဈတောနဲ့ရာသီ၊ မွနျမာပွညျရဲ့ အသကျ 💖ဆှမြေိုးတှေ ထမငျးခကျြမယ့် ပါရမီ Gas ✅ပါရမီ Gas ဖွငျ့ ခကျြပွုတျ၍ ကောငျးမှနျလှပ သော အနာဂါတျ ကိုဖနျတီးကွပါစို့ 📣အမွနျဆုံး ဆကျသှယျလိုကျပါ ၊ Promotion တှရှေိတယျနျော #poem #gas #forest #green #lpg #parami
May 12/ 2020
"ပါရမီ" ဂက်စ်ဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချရသော မိသားစုစားဖိုဆောင်ကို တည်ဆောက်ကြမယ်✅ "ပါရမီ" ဂက်စ်ဖြင့် အဟာရပြည့်ဝသော စားသောက်ဖွယ်ရာများကို ချက်ပြုတ်ကြမယ်✅ "ပါရမီ" ဂက်စ်ဖြင့် ချက်ပြုတ်၍ ပျော်ရွှင်ပြည့်ဝ မိသားစုဘဝ ကိုပိုင်ဆိုင်လိုက်ပါ✅ "ပါရမီ" ဂကျဈဖွငျ့ လုံခွုံစိတျခရြသော မိသားစုစားဖိုဆောငျကို တညျဆောကျကွမယျ✅ "ပါရမီ" ဂကျဈဖွငျ့ အဟာရပွညျ့ဝသော စားသောကျဖှယျရာမြားကို ခကျြပွုတျကွမယျ✅ "ပါရမီ" ဂကျဈဖွငျ့ ခကျြပွုတျ၍ ပြျောရှငျပွညျ့ဝ မိသားစုဘဝ ကိုပိုငျဆိုငျလိုကျပါ✅ #parami #health #food #family #happy #gas #lpg
May 13/ 2020
🌸မီးဖိုဆောငျဟာ သား၊သမီးတှရေဲ့ ပြျောရှငျစရာ စာသငျခနျးတဈခုပါ 💯ယနေ့ အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့ ဟငျးလြှာတှဟော မိဘတှရေဲ့လကျဆငျ့ကမျးခွငျးရဲ့ ရလာဒျတှပေါ ✅အရေးကွီးတဲ့ မိသားစု မီးဖိုဆောငျကို 💖စိတျခလြုံခွုံ၊ သုံးစှဲသကျသာစမေယျ့၊ အသဈစကျစကျ ပါရမီ Gas ဖွငျ့အလှဆငျကွပါစို့ 📣ပါရမီ Gas ဝယျယူမယျဆိုရငျ ဖုနျး ၈၄၈၄ ကို ဆကျသှယျမှာယူနိုငျပါတယျ 🌸မီးဖိုဆောင်ဟာ သား၊သမီးတွေရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ စာသင်ခန်းတစ်ခုပါ 💯ယနေ့ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ဟင်းလျှာတွေဟာ မိဘတွေရဲ့လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းရဲ့ ရလာဒ်တွေပါ ✅အရေးကြီးတဲ့ မိသားစု မီးဖိုဆောင်ကို 💖စိတ်ချလုံခြုံ၊ သုံးစွဲသက်သာစေမယ့်၊ အသစ်စက်စက် ပါရမီ Gas ဖြင့်အလှဆင်ကြပါစို့ 📣ပါရမီ Gas ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ဖုန်း ၈၄၈၄ ကို ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ် #parami #gas #lpg #family #learning #cooking
May 14/ 2020
💖မြန်မာပြည်သူတွေ gas သုံးစို့ ကမ္ဘာသုံးမို့လိုက်မှီစေချင် 💞သဘာဝနဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ချစ်ခင်သူတိုင်းအတွက် 💖စိတ်ချလက်ချသာချက် ပါရမီ gas ✅ပါရမီ Gas ဖြင့် ချက်ပြုတ်၍ ကောင်းမွန်လှပ သော အနာဂါတ် ကိုဖန်တီးကြပါစို့ 💖မွနျမာပွညျသူတှေ gas သုံးစို့ ကမ်ဘာသုံးမို့လိုကျမှီစခေငျြ 💞သဘာဝနဲ့ပတျဝနျးကငျြ ခဈြခငျသူတိုငျးအတှကျ 💖စိတျခလြကျခသာခကျြ ပါရမီ gas ✅ပါရမီ Gas ဖွငျ့ ခကျြပွုတျ၍ ကောငျးမှနျလှပ သော အနာဂါတျ ကိုဖနျတီးကွပါစို့ #parami #gas #lpg #cook #kitchen
May 15/ 2020
📻 သီခငျြးသံငွိမျ့ငျွိမျ့ညောငျးညောငျးလေးနဲ့ မီးဖိုဆောငျထဲမှာ ♨️အကောငျးဆုံးဖနျတီးမှုတှနေဲ့ ပြျောရှငျစှာ ခကျြပွုတျမယျဆိုရငျ 💖စိတျခယြုံကွညျ လှပတဲ့ ပါရမီ Gas နဲ့မှ ဖွဈမယျ 📣ပါရမီ Gas ဝယျယူမယျဆိုရငျ ဖုနျး ၈၄၈၄ ကို ဆကျသှယျမှာယူနိုငျပါတယျ 📻 သီချင်းသံငြိမ့်ငြိ်မ့်ညောင်းညောင်းလေးနဲ့ မီးဖိုဆောင်ထဲမှာ ♨️အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ချက်ပြုတ်မယ်ဆိုရင် 💖စိတ်ချယုံကြည် လှပတဲ့ ပါရမီ Gas နဲ့မှ ဖြစ်မယ် 📣ပါရမီ Gas ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ဖုန်း ၈၄၈၄ ကို ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ် #beautiful #sexy #cooking #lpg #gas #parami
May 16/ 2020
💯အကြိုးပွု ဉာဏျစမျးပဟဠေိအဖွရှော ဆုငှကေပျြတဈသောငျးရယူပါ" အစီအစဉျမှာ 🙏ဝငျရောကျဖွဆေိုပေးကွသူမြားအားလုံးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ အကွံဉာဏျတှတေျောတျောမြားမြားကောငျးလှနျးလို့ Page Admin ကိုယျတိုငျသုံးရကျတိတိအခြိနျယူပွီးComment ဖွဆေိုသူမြားထဲမှ အယောကျ(၅၀)ကိုရှေးခယျြလိုကျပါတယျ ၊ဒီထကျပိုပွီးတိုငျးပွညျအပျေါအကြိုးပွုနိုငျပါစေ ☝️ဆုငှမြေားကို ထုတျယူဖို့ chat box မှာ လာဆကျသှယျပေးပါနျော 🇲🇲အကွံဉာဏျတှကေိုပေါငျးခြုပျပွီး ပွနျတငျပေးပါမယျ ၊ မွနျမာပွညျကွီး ပွနျလညျကနျြးမာ၊ ခမျြးသာနိုငျပါစလေို့ ပါရမီ Gas မိသားစုမှ ဆန်ဒပွုအပျပါတယျ 💪"အခကျအခဲတှမှော အခှငျအရေးတှရှေိပါတယျ" ASSK အကျိုးပြု ဥာဏ်စမ်းပဟေဠိအဖြေရှာ ဆုငွေကျပ်တစ်သောင်းရယူပါ" အစီအစဉ်မှာ ၀င်ရောက်ဖြေဆိုပေးကြသူများအားလုံးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် အကြံဉာဏ်တွေတော်တော်များများကောင်းလွန်းလို့ Page Admin ကိုယ်တိုင်သုံးရက်တိတိအချိန်ယူပြီးComment ဖြေဆိုသူများထဲမှ အယောက်(၅၀)ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ် ၊ဒီထက်ပိုပြီးတိုင်းပြည်အပေါ်အကျိုးပြုနိုင်ပါစေ ဆုငွေများကို ထုတ်ယူဖို့ chat box မှာ လာဆက်သွယ်ပေးပါနော် အကြံဉာဏ်တွေကိုပေါင်းချုပ်ပြီး ပြန်တင်ပေးပါမယ် ၊ မြန်
May 17/ 2020
👉အိမျခကျြ လား ♨️ဟငျးလေးတှကေမှေးကွိုငျလိုကျတာ 🥰အရသာကလဲ ကောငျး... အဲခကျြရတာလဲမပငျပနျးဘူး 👍ခကျြဖို့ Gas မှာရငျ လှယျတယျ မွနျတယျ စိတျခရြတယျ ✅ဟေ့.. ဟေ့ ငါသိပွီ ဒါဆို ပါရမီ Gas နဲ့ခကျြတာဘဲဖွဈရမယျ 👉အိမ်ချက် လား ♨️ဟင်းလေးတွေကမွှေးကြိုင်လိုက်တာ 🥰အရသာကလဲ ကောင်း... အဲချက်ရတာလဲမပင်ပန်းဘူး 👍ချက်ဖို့ Gas မှာရင် လွယ်တယ် မြန်တယ် စိတ်ချရတယ် ✅ဟေ့.. ဟေ့ ငါသိပြီ ဒါဆို ပါရမီ Gas နဲ့ချက်တာဘဲဖြစ်ရမယ် #parami #gas #lpg #cooking #home #yummy #reliable
October 24/ 2020
. ဒီအပတ်မှာတော့ အိမ်မှာအလွယ်တကူ လုပ်စားလို့အောင် ပန်းသေးခေါက်ဆွဲကြော် နည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့် . ဒီလိုအချိန်မှာ အပြင်စာတွေ သိပ်မစားပဲ အိမ်မှာပဲ မိသားစု အတူတူ ချက်ပြုတ်စားသောက်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲနော် . ပန်းသေးခေါက်ဆွဲကြော် ============== ပါဝင်ပစ္စည်းများ - ခေါက်ဆွဲ၊ ကြက်သား၊ - ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ချင်း၊ - ဆီ၊ လေးညှင်း၊ သစ်ချပိုးခေါက်၊ ဖာလာ ၊ ဇီယာ၊ - ကြက်သားမှုန့် ၊ အရောင်တင်မှုန့် ၊ ဆား၊ ပဲငံပြာရည်(အကြည်၊အနောက်)၊ - ခရုဆီ၊ သကြား၊ မဆလာ၊ နနွင်းမှုန့်၊ - ရှောက်ကောမှုန့်၊ ဂေါ်ဖီ၊ ဥနီ ၊ ပင်စိမ်း . ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် ---------------------- Step(1)။ ။ ဆီဆူလာလျှင် လေးညှင်း၊ သစ်ချပိုးခေါက်၊ ဖာလာ နှင့် ဇီယာတို့ကို ဆီသတ်ပေးရပါမည်။ . Step(2)။ ။ အနည်းငယ်ကြာလျှင် ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ချင်းတို့ကို အနီရောင်သန်းလာသည်အထိကြော်ပေးရပါမည်။ . Step (3)။ ။ကြက်သားကို အရောင်တင်မှုန့်၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ဆား၊ သကြား၊ ခရုဆီ၊ မဆလာ၊ ပဲငံပြာရည်(အကြည်၊အနောက်) ၊ နနွင်းမှုန့်တို့နှင့် နယ်ထားပေးရပါမည်။ . Step(4)။ ။အညိုရောင်သန်းလာလျှင် နယ်ထားသော ကြက်သားနှင့် ရှောက်ကောမှုန့်ထည့်ပေးရပါမည်။ . Step(5)။ ။
October 26/ 2020
ပါရမီ Gas ကိုချစ်သော မိဘပြည်သူအပေါင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်း ကျရောက်နေသော ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးဘေးမှ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေရှင် . အပြင်ထွက်သွားလာရင်လည်း mask တပ်ခြင်း၊ လက်ဆေးခြင်း၊ ၆ ပေအကွာမှ‌နေခြင်းနဲ့ လူစု လူဝေးရှောင်ခြင်းတို့ကို သတိရှိရှိနဲ့ ဆောင်ရွက်ကြဖို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော် . ဘေးကင်း စိတ်ချကတဲ့ အသစ်စက်စက် ပါရမီ Gas အိုးကို လိုအပ်ရင် ဖုန်း ၈၄၈၄ ကိုဆက်နော်။☎️☎️ . အသေးစိတ်ကို paramilpg.com မှာလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ . +Uni . ပါရမီ Gas ကိုခဈြသော မိဘပွညျသူအပေါငျးနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံသူနိုငျငံသားအပေါငျး ကရြောကျနသေော ရောဂါကပျဆိုးကွီးဘေးမှ အမွနျဆုံး လှတျမွောကျကြျောလှားနိုငျကွပါစရှေငျ . အပွငျထှကျသှားလာရငျလညျး mask တပျခွငျး၊ လကျဆေးခွငျး၊ ၆ ပအေကှာမှ‌နခွေငျးနဲ့ လူစု လူဝေးရှောငျခွငျးတို့ကို သတိရှိရှိနဲ့ ဆောငျရှကျကွဖို့နှိုးဆျောတိုကျတှနျးလိုကျပါတယျနျော . ဘေးကငျး စိတျခကြတဲ့ အသဈစကျစကျ ပါရမီ Gas အိုးကို လိုအပျရငျ ဖုနျး ၈၄၈၄ ကိုဆကျနျော။☎️☎️ . အသေးစိတျကို paramilpg.com မှာလညျး လလေ့ာနိုငျပါတယျ။ . #Paramilpg #gas #freedelivery #call_8484 #safe
October 25/ 2020
🔊🔊 🌟 Thadingyut Special Promotion လာပြီနော် 🕯️🎆🎇 . 🙏 🎇ထူးမြတ်တဲ့ သတင်းကျွတ်အခါသမယမှာ ချစ်ခင်ရတဲ့ လူကြီးမိဘများကို ဂါဝရပြု လက်ဆောင်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အိမ်က မိသားစုမီးဖိုဆောင်မှာသုံးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သီတင်းကျွတ်အထူး အစီအစဉ်အနေနဲ့ ပါရမီ Gas အိုး နဲ့ မီးဖို အစုံလိုက်များကို 7%off ပရိုမိုးရှင်းနဲ့ရောင်းချပေးနေပါတယ်ရှင့်။ 😍 . ပရိုးမိုးရှင်းကာလက ၂၅.၁၀.၂၀၂၀ မှ ၅.၁၁.၂၀၂၀ အထိဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ဝယ်ယူလိုတဲ့ Package ရဲ့ 7% တောင်သက်သာမှာဆိုတော့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့အခွင့်အရေးပါနော် 🤩 . 🎁 လူကြီးမိဘများကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက် ဂါဝရပြုဖို့ အဆင်မပြေဖြစ်မှာလည်း မစိုးရိမ်နဲ့နော်။ ပါရမီ Gas က အိမ်အရောက် အခမဲ့ ပို့ပေးပြီး တပ်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်လို့ ဖုန်းလေးသာဆက်လိုက်နော်။ ☎️ . ဘယ်လို Package တွေရှိပြီး ဘယ်လောက် ပိုက်ဆံတွေ Save ဖြစ်မလဲဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ ပုံလေးတွေမှာ လေ့လာကြည့်ပေးပါရှင့်။ 🥰 . Package တွေနဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို Paramilpg.com တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ . အန္တရာယ်ကင်း အသစ်စက်စက် ပါရမီ Gas အိုးကို ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်း၈၄၈၄ ကို ဆက်လိုက်ပါနော်။ 🤙 . +Uni . 🔊🔊 🌟 Thadingyu
2019 Ⓒ Parami gas